Imibuzo eyi-101… Umthengi, Wezepolitiki, ohlekisayo no-Starbucks | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 16, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Benginosuku lokuphumula namuhla (bengiludinga!). Ngifunde kwenye ibhulogi ukuthi abantu abaningi bafuna "101". Ngakho… njengenjwayelo, ngivivinya inkolelo-mbono ukubona ukuthi impendulo iyini. Kwangimangaza ukuthi kwakulula kanjani ukuqhamuka nalokhu, kunezinto eziningi emhlabeni, kwezamabhizinisi nakuleli ezingihlanyisa. Vele, mhlawumbe yimina nje. Zizwe ukhululekile ukubuza imibuzo yakho noma uphendule eyami ngokusebenzisa imibono.
Kungani i-Starbucks ingenzi amabha chocolate? (Umbono wendodakazi yami eneminyaka engu-12 ubudala!)
Kungani udinga izinto ezingama-15 zomugqa we-Express Lane? Kungani kungabi ubuncane benqola ephelele engu-1? Yimina umfana osebenzisa yonke imali!
Kungani isaladi esikhwameni lihamba kabi ngokushesha okungaka?
Kungani kulungile ukuthi ibhange likhokhise umuntu ompofu u- $ 30 ngesheke elibhokisiwe lika- $ 1 kodwa ngeke libanikeze ikhadi lesikweletu elinenzalo ephezulu?
Kungani ibhange lingakhipha imali yami ngokushesha ukuze libheke isheke engilibhalayo kepha lona libambe izinsuku ezi-5 kusheke engilifaka?
Uma ngikwazi ukuthola ikhadi le-2Gb SD, kwenzeka kanjani ukuthi ungakwazi ukubeka ama-500 walabo ndawonye bese unginika ikhadi le-1Tb esikhundleni sedrayivu enezingxenye ezihambayo ezihlulekayo?
Uma imboni yezomculo ingenabo ubugovu, pho kwenzeka kanjani ukuthi basebenzise amathani emali kuma-cribs, bling, dubs, grills, njll.?
Uma ngikwazi ukulalela iCD, lokho akusho yini ukuthi ngiyohlale ngikwazi ukuyirekhoda?
Kungani izitolo ezinkulu zikhipha konke emashalofini bese kufanele ziphake konke emuva ezikhwameni? Ingabe ayikho indlela esebenza kahle kakhulu?
Kungani isigwebo sentambo imvamisa kungukuboshwa udilikajele, kanti udilikajele yiminyaka engama-20 ngempela?
Kungani wonke umuntu ethi “Ukwehlukaniswa KweSonto NoMbuso” kube kungekho kuMthethosisekelo noma kuSimemezelo Sokuzimela?
Kungani ngikhokha imali yezikole zomphakathi zezingane zami? Bengicabanga ukuthi sikhokhe intela ngalokho.
Kungani kulungile ukuthi uhulumeni azame ukushintsha imithetho yobumfihlo ekuvikeleni inkululeko?
Kungani kunamaqembu amakhulu amabili kuphela e-United States?
Kungani ukunakekelwa kwezempilo kungabizi kubantu abangakusebenzisi?
Kungani izimpahla zebhizinisi zabesifazane zishibhile kakhulu kunezamasudi amadoda?
Kungani silalela abeluleki esingabazi kepha kwesinye isikhathi singalaleli amakhasimende ethu noma abasebenzi lapho bekhuluma into efanayo?
Kwenzeka kanjani ukuthi osopolitiki bavunyelwe ukubhala imithetho yabo kokulungile nokungalungile?
Kwenzeka kanjani ukuthi osopolitiki bathathe umhlalaphansi ngaphambi kwabantu abasemasosheni?
Kwenzeka kanjani ukuthi singavoteli ukuphakanyiswa kosopolitiki?
Uma izingane zami kufanele zithathe ama-SAT ukungena ekolishi, kwenzeka kanjani ukuthi osopolitiki bangadingi izivivinyo ukuze bangene ezikhundleni?
Kungani amanzi engiwakhipha empompini eshintsha umbala osinki bami, izindlu zangasese namabhavu okugeza?
Kungani abantu becabanga ukuthi izimoto eziluhlaza ziyimpendulo, lapho bezifaka emasokheni ngamandla akhiqizwe kumalahle nangamandla enuzi?
Kungani kulungile ukuba nezinsimbi zikawoyela egcekeni lawo wonke umuntu eTexas, kepha hhayi e-Alaska lapho kungahlali muntu?
Kungani sinabaphathi bamaphoyisa, amaphoyisa ombuso namaphoyisa asedolobheni bonke endaweni eyodwa?
Uma leli kuyizwe elikhululekile, kungani abantu bengavunyelwe ukwenza izidakamizwa?
Kungani ukugembula kungekho emthethweni ngaphandle kokuthi kulawulwa ilotho nguhulumeni?
Kungani izithelo zibiza kakhulu kunama-chips amazambane? Heck, ikhula ezihlahleni!
Kungani imibhalo esemthethweni nezidakamizwa kungekho emthethweni? Imigomo kukhona izidakamizwa.
Kungani i-United States ingakwazi ukushintshela ohlelweni lwe-metric? Kulula ukuhlukanisa nokuphindaphindeka ngamashumi!
Kwenzeka kanjani ukuthi iBhayibheli lingekho ohlwini lwabathengisa kakhulu eNew York Times?
Kungani umculo omningi wamaKrestu uncela?
Kungani amaswidi nama-popcorn ebiza kangaka eTiyetha? Ngangihamba kaningi uma kwakungekho… futhi mhlawumbe ngisebenzisa imali eningi.
Kungani izitolo zinemigqa eminingi yokuphuma lapho iningi lazo livaliwe?
Kungani ulindele ukuthi abantu bakhokhele izinto uma uzokhipha mahhala kuqala? Ungiqeqesha ngokungalungile!
Kungani iPuerto Rico ingeyona izwe kepha i-Alaska neHawaii?
Kungani amabutho ethu kufanele alandele imithetho futhi amaphekula angayenzi?
Kungani izingane zami zinesikhathi esiningi kangaka sokungayi esikoleni?
Kungani kuhlelwa imicimbi eminingi kangaka yesikole ngesikhathi somsebenzi?
Kungani izinyunyana zomphakathi ezingama-gay zingalungile?
Kungani wonke umuntu ebukeka emangele uma ngibatshela ukuthi ngigcine izingane zami ngokugcwele?
Kungani kufanele ngibe nomshwalense ohlukile wamehlo, umzimba namazinyo? Akukhona konke okwelapha?
Kungani abaninikhaya bethatha inzalo yabo enteleni kepha abaqashi abakwazi ukukhipha intela? Ngabe ukuqasha akusizi yini nomnotho?
Bacebile kanjani osopolitiki?
Kungani u-Al Gore ethatha i-jet yangasese lapho eya khona ekukhulumeni ngokufudumala komhlaba?
Uma sisempini, imboni kawoyela ingaqhubeka kanjani nokuthola inzuzo yerekhodi? Akuyona leyo ntengo egwinya?
Kwenzeka kanjani ukuthi singakwazi ukuyeka ugaxekile?
Ngubani othumela logaxekile lapho ungeke ukwazi ukuqonda noma yimaphi amagama? Kungani beyithumela?
Kungani sibamba amasosha ezingeni eliphakeme kangaka kanti iningi lamasosha ngabantu abangakwazi ukuya ekolishi noma abavela ekukhulisweni okuyinselele?
Kungani kungaxoshwa osopolitiki?
Kwenzeka kanjani ukuthi i-Indiana ishintshe izindawo zesikhathi futhi isenezinye izifunda kwezinye?
Kungani singahlanganisi imitapo yolwazi yomphakathi nemitapo yolwazi yezikole eziphakeme bese sigcina inqwaba yemali?
Kwenzeka kanjani ukuthi izigebengu ezinekhola emhlophe zikuthole kulula lapho zintshontsha ngaphezu kwezigebengu ezivamile?
Imakethe yamasheya akuyona yini ukugembula?
Kungani kufanele ngiye endaweni yokucima ukoma ukuthola usuku? Abekho yini abesifazane abangashadile abazungeza eBorder?
Kungani i-Starbucks neMingcele ingekho iLadies Night?
Kungani kungekho ezinye izinsizakalo zendlu ngendlu? (isibonelo: ukuhlanza amanzi)
Kungani ungavimbeli imithwalo ezindizeni?
Kungani abaholi benkolo bengasukumi ngokwengeziwe lapho abalandeli babo behlambalaza?
Kungani iFrance inezikhungo zamandla enuzi eziningi kune-United States?
Kungani singakwazi ukuhambisa imfucumfucu yenuzi emkhathini?
Kungani i-hemp ingekho emthethweni? Ikhula ngokushesha kunezihlahla, inamandla, futhi ayisona isidakamizwa.
Kungani uTommy Chong aye ejele ngenxa yezidakamizwa, kepha uRush Limbaugh usesemsakazweni ngemuva kokusebenzisa izidakamizwa ngokungemthetho?
Kwenzeka kanjani ukuthi izinto zibize kangaka esitolo esikahle? Kungakuhle kakhulu uma ngingakhokhi imali engaka.
Kungani sikhala ngentengo yegesi kepha sikhokha u- $ 3.50 weGrande Mocha eStarbucks. (Mmmmmm.)
Kungani kungezona izimoto zabo ezihlala zodwa? Ngibona umuntu oyedwa kuphela kuzo zonke izimoto ezisendleleni eya emsebenzini.
Kungani izintatheli zethelevishini zibukeka kahle kangaka?
Kungani ukukhuluphala kuyisimo sezokwelapha e-United States kuphela?
Kungani ungaba usayizi omkhulu ngamasenti angama-49 athe xaxa, kepha ungeke usayizi wesigamu bese ulondoloza amasenti angama-49
Uma ukuzivocavoca kukufanele, kwenzeka kanjani ukuba kungabi khona ndlela yokuthi ngihambe noma ngigibele ibhayisikili lami ngiye emsebenzini?
Kungani kufanele uvote ngoba othile, kepha akakwazi ukuvota ngokumelene othile?
Kungani kunzima kangaka ngathi ukubala amavoti?
Kungani ngingatholi iGrande Mocha kuma-Movie?
Kungani sinaka okwengeziwe kulokho okushiwo ngabalingisi kanti konke abakwenzayo ukuzenzisa ukuze baziphilise?
Kungani kufanele ngifunde i-athikili ebhalwe ngumfana oneziqu zobuntatheli ekhuluma ngobuchwepheshe esikhundleni sokufunda ibhulogi yomuntu ophila ngezobuchwepheshe?
Kwenzeka kanjani ukuba umfana ovuka ekuseni futhi angibuze idola nsuku zonke lapho ngiya emsebenzini engawutholi umsebenzi?
Kungani imigoqo ingahlinzeki ngezinsizakalo zamatekisi kubantu abaphuza kakhulu?
Kwenzeka kanjani ukuthi singakwazi ukuhlela kabusha okhiye kukhibhodi ukuze sisebenze kahle ngokuthayipha?
Uma uthuli lubulala ikhompyutha yakho, kwenzeka kanjani ukuthi kungabikho izihlungi ezizoshintsha?
Kungani uhlelo lokusebenza lushibhile kunohlelo lwehhovisi?
Kwenzeka kanjani ukuthi bangakhi iphrinta nge-hard drive ne-router eyakhelwe ngaphakathi?
Kungani bengazange basungule ama-DVD wokusebenzisa i-High-Definition?
Kungani izingane zami zingakwazi ukuthandaza ngokuzwakalayo esikoleni kanti inkululeko yenkolo iyilungelo lomthethosisekelo?
Kungani abantu bengaqondi ukuthi intela ephansi iletha imali ethe xaxa yentela?
Kungani ezinye izindiza zingenakuba nezindiza ezisuka lapho zonke izihlalo zigcwele esikhundleni sohlelo?
Kungani intengo yamathikithi endiza ibiza kakhulu njengoba isondela esikhathini sokuhamba? Kungani kungabizi?
Kwenzeka kanjani ukuthi ngikwazi ukubhalisela ukukhokhwa kwemali ekhokhwayo online ezindaweni eziningi, kepha angikwazi ukuyikhansela ku-inthanethi?
Kungani abaphathi bamaselula bengakuniki isikhathi esibe yikhasimende labo?
Kungani ikhibhodi yami engenantambo negundane kungavuselelwa?
Kungani wonke umuntu kufanele abe nomshuwalense wemoto? Kungani ngingenakuba nesikhwama somshwalense nje?
Kwenzeka kanjani ukuthi noma nini lapho ngihamba ngesivinini esisheshayo, wonke umuntu agijime… kepha ngaso sonke isikhathi uma ngihamba ngejubane, ngiyadonswa?
Kungani izinkampani zinganikeli abasebenzi bazo isikweletu nemalimboleko?
Kwenzeka kanjani ukuthi abaningi abaphothule amakolishi bangalokothi basebenze emkhakheni abaphethe kuwo iziqu?
Kwenzeka kanjani ukuthi abantu bangatholi iziqu 'zesikhathi esisebenzile' emsebenzini noma embonini?
Kungani iPETA ilalisa izilwane eziningi kangaka?
Kwenzeka kanjani ukuthi abantu balwe nenkundla yebhola kodwa hhayi umnyuziyamu?
Kwenzeka kanjani ukuthi abaphathi ababi abanenzuzo ephezulu bangaxoshwa futhi nabantu ababasebenzisile bathola uxolo?
Kwenzeka kanjani uma izinkampani zikhula, zihamba kancane?
Kwenzeka kanjani ukuthi i-intanethi ikhule, kufanele ngifunde izilimi eziningi nobuchwepheshe esikhundleni sokuncane?
Kwenzeka kanjani ukuthi Yahoo!, Google, Microsoft, Monster, Adp, noma uCareerbuilder akanginikanga u- $ 1 million dollars I-Payraise Calculator okwamanje?
[Faka Umbuzo Wakho Lapha]
Qaphela: Umqondo walolu hlu uqhamuke ku- ProBlogger futhi wangena kulokhu okuthunyelwe kwakhe Iphrojekthi Yokubhala Yeqembu yohlu.
I-Interactive Computing, efana ne-Minority Report
Aug 18, 2006 ku-8: 26 AM
Aug 18, 2006 ngo-12: 44 PM
Uhlu oluhle - uphakamisa imibuzo emihle kakhulu. Ungakhathazeka uma singaboleka ezimbalwa zazo ukuze sizivocavoce ngokudala kwakho?
Aug 21, 2006 ku-2: 18 AM
14. Kungani kunamaqembu amakhulu amabili kuphela e-United States?
Sinabo ngoba sinqobile sithatha lonke ukhetho. Abantu baseYurophu banohlelo oluhluke ngokuphelele lokhetho lwabo, oluvuna amaqembu amaningi nokuphatha umfelandawonye.
28. Kungani izithelo zibiza ukwedlula ama-chips amazambane? Heck, ikhula ezihlahleni!
Izindleko eziningi zezithelo ezintsha zibangelwa ukonakala. Amazambane akhula enhlabathini futhi ashibhile kakhulu.
36. Kungani iPuerto Rico ingewona izwe kepha i-Alaska neHawaii?
Abantu basePuerto Rico bavotela ukungabi uMbuso.
37. Kungani amabutho ethu kufanele alandele imithetho futhi amaphekula angawenzi?
Babizwa ngobuphekula ngoba bengalandeli imithetho yezimpi zomhlaba.
43. Kungani abaninikhaya bethola inzalo yabo enteleni kepha abaqashi abakwazi ukukhipha intela yabo? Ngabe ukuqasha akusizi yini nomnotho?
Kukhona ukudonswa komqashi.
45. Kungani u-Al Gore ethatha i-jet yangasese lapho eya khona ekhuluma ngokufudumala komhlaba?
Kakhulu kungenxa yokuthi u-Al Gore ungumzenzisi ocebile we-elitist.
49 Kungani sibambe amasosha ezingeni eliphakeme kangaka kanti iningi lamasosha ngabantu abangenakukwazi ukuya ekolishi noma bavele ekukhuleni okunenselelo?
Iningi labasebenzi bezempi livela emikhakheni esezingeni eliphakathi.
53 Kwenzeka kanjani ukuthi izigebengu ezinekhola elimhlophe zikuthole kulula lapho zintshontsha ngaphezu kwezigebengu ezejwayelekile?
Uma kunje kungenzeka kungenxa yokuthi u-A. Banabameli abangcono, kanti uB. Akazange afake isibhamu ebusweni banoma ngubani ukuthola lokho abakufunayo.
63. Kungani uTommy Chong aye ejele ngenxa yezidakamizwa, kepha uRush Limbaugh usesemsakazweni ngemuva kokusebenzisa izidakamizwa ngokungemthetho?
UTommy ukhishwe e-Utah. I-Utah iyisimo esiqine kakhulu. Ngokwalokho ekufanele, iSalt Lake mhlawumbe idolobha elikhulu lokugcina eMelika lapho abantu bengakhiyanga iminyango yabo ebusuku.
66. Kungani kungezona izimoto zabo ezihlala zodwa? Ngibona umuntu oyedwa kuphela kuzo zonke izimoto ezisendleleni eya emsebenzini.
Izimoto ezihlala zodwa zibizwa ngokuthi izithuthuthu.
70. Uma ukuzivocavoca kukufanele, kungani ingekho indlela yokuthi ngihambe noma ngigibele ibhayisikili lami ngiye emsebenzini?
Ngigibela ibhayisikili lami ngiya emsebenzini nsuku zonke. Uma kubalulekile kuwe ukuhamba noma ukugibela ibhayisikili lakho uye emsebenzini, khona-ke thola umsebenzi eduzane nasekhaya noma usondele eduze nalapho usebenza khona. Akuwona umthwalo wawo wonke umuntu emhlabeni ukwakha imigwaqo yezindlela nezindlela zamabhayisikili ezikuzungezelayo.
77. Kungani imigoqo ingahlinzeki ngezinsizakalo zamatekisi kubantu abaphuza kakhulu?
Abaningi empeleni bazokhokhela i-cab yamakhasimende adakiwe, ngenxa yezinkinga zezikweletu ezisemthethweni.
83. Kungani izingane zami zingakwazi ukuthandaza ngokuzwakalayo esikoleni ngenkathi inkululeko yenkolo iyilungelo lomthethosisekelo?
Njengoba ngiwuqonda umthetho, izingane zakho zikhululekile ukuthandaza esikoleni. Kodwa-ke akukho emthethweni ukuthi uthisha ajoyine noma abakhuthaze ukuthi benze njalo.
Aug 21, 2006 ku-3: 44 AM
11. Kungani wonke umuntu ethi â ?? Ukwehlukaniswa kweSonto NoMbusoâ ??? uma ungekho kuMthethosisekelo noma kwiSimemezelo Sokuzimela?
Lona umugqa ojwayelekile osetshenziswa yi-ACLU, futhi abezindaba benkululeko abanaso isisusa sokuyiphonsela inselelo.
19. Kwenzeka kanjani ukuthi osopolitiki bathathe umhlalaphansi ngaphambi kokuba abantu abasemasosheni bakwazi?
Abantu bezempi bangathatha umhlalaphansi ngaphambi nje kokuzalwa kwabo kweminyaka engama-37.
20. Kwenzeka kanjani ukuthi singavoteli ukuphakanyiswa kosopolitiki?
SineRiphabhuliki lapho imithetho nemithetho yenziwa khona yizikhulu ezikhethiwe, kunokuba kube yintando yeningi eqondile, lapho imithetho nemithetho yenziwa khona ngokuthanda kwabantu ngqo.
22. Kungani amanzi engiwakhipha empompini eshintsha umbala osinki bami, izindlu zangasese namabhavu okugeza?
Mina nawe sihlala e-Indianapolis, amanzi ethu angaphansi komhlaba aqukethe inqwaba yamatshe amatshe amatshe, ashiya ibala.
34. Kungani izitolo zinemigqa eminingi yokuphuma ekubeni iningi lazo livaliwe?
Basebenzisa imizila eyengeziwe ngesikhathi sikaKhisimusi lapho izitolo zigcwele abathengi.
38. Kungani izingane zami zinesikhathi esiningi kangaka sokungayi esikoleni?
Ngakho-ke abafana bangasiza i-pa yabo ngemisebenzi yasepulazini.
40. Kungani izinyunyana zomphakathi ezingongqingili zilungile?
Kungani izinyunyana zomphakathi zingaqondile? Ngingaba nenhlangano yomphakathi ne-hamster yami; Ngicabanga ukuthi kufanele ambozwe uhlelo lwami lwezempilo. Kuthiwani ngamaMormon esithembu angaba nenhlangano yomphakathi nawo wonke amakhosikazi ayi-14?
41. Kungani wonke umuntu ebukeka emangele uma ngithi kuye ngigcina izingane zami ngokugcwele?
Cishe babukeka bemangele ngoba amadoda cishe awalokothi athole ilungelo eligcwele lokugcina izingane zabo esehlukaniso sase-Indiana. Ukugcinwa ngokugcwele kuvame ukunikezwa ubaba kuphela lapho umama enze isikhathi esibucayi ejele.
44. Ngabe osopolitiki bacebe kangaka?
Osopolitiki abaningi bathola ingcebo yabo ngaphambi kokungena ezikhundleni. Uma umuntu eba yisicebi ngenkathi esesikhundleni, kungenzeka ukuthi bakwenze lokho ngokungathembeki. Umbuzo wakho kumele ube ngu-â ?? kungani kungukuthi abantu abacebile kuphela abakhangwa ukungenela isikhundlaâ ???? Impendulo ibingaba, ngoba abantu abasebenzayo kufanele babe matasa behola imali yokungenela izikhundla.
46. ​​Uma sisempini, imboni kawoyela ingaqhubeka kanjani nokuzuza amarekhodi? Ingabe akulona lelo nani lentengo?
Izintengo zika-oyela zibekwa ngokuhlinzekwa nokufunwa. Izinkampani zesoftware nazo zenza inzuzo yokurekhoda, ingabe lokho kuyigugu lentengo? Ukulungiswa kwamanani kuholela ekusweleni, ekuqoqeni nasekuhwebeni ezimakethe ezimnyama.
50. Kungani kungaxoshwa osopolitiki?
Bangaba, bangakhululeka okhethweni. ICalifornia ikhumbula ukhetho, yathatha lokhu yayisa ezingeni elisha.
51. Kwenzeka kanjani ukuthi i-Indiana ishintshe izindawo zesikhathi futhi isenezinye izifunda kwezinye?
Ngokwazi kwami, i-Indiana time zone hopping ihlobene nokungahleleki kahle kwezengqondo amaHoosiers abonakala anakho. Yonke le ndaba yayingenangqondo kimi.
54. Akuyona yini imakethe yamasheya ukugembula?
Ngicabanga ukuthi ukugembula, kepha nokuwela umgwaqo kuwukugembula ngendlela ethile. Ngicabanga ukuthi ihlukaniswe nokudlala ngoba ayihlangene nezokungcebeleka.
Aug 21, 2006 ku-3: 50 AM
55. Kungani kufanele ngiye endaweni yokucima ukoma ukuze ngithole usuku? Ngabe akukho bantu besifazane abangashadile abahlanganyela eMingceleni?
Ngizwa abesifazane abangashadile bebuza lo mbuzo ofanayo. Ngicabanga ukuthi inkinga onayo ayenzi kangako lapho ubheka khona, kakhulu ukuthi ufuna bani. Ngingacabanga ukuthi uhlangana nabesifazane abangashadile emingceleni kaningi kepha akubona abesifazane obafunayo.
56. Kungani i-Starbucks neBorder ingekho iLadies Night?
Ngicabanga ukuthi abesifazane besifazane babhekise ekushodeni kwemali ekhokhelwayo yabesifazane. Njengoba iStarbucks ingakukhokhisi ukuthi ungene, angiboni ukuthi lokhu kuzosebenza kanjani. Abantu baya ezindaweni zokucima ukoma ukuze baxhumane ngoba utshwala buyanciphisa ukuvimbela umphakathi, futhi ngoba ukudansa kuluhlobo oluthile lokudlala okuyinqaba.
57. Kungani zingekho ezinye izinsizakalo zendlu ngendlu? (Isibonelo: ukuhlanza indawo eyomile)
I-Indianapolis inayo insiza yokuhlanza indlu ngendlu ngendlu. Awekho amanye ala mabhizinisi ngoba ayabiza kakhulu futhi ngokuvamile asebenza kuphela emakhaya asenyakatho.
60. Kungani iFrance inezikhungo zamandla zenuzi eziningi kune-United States?
Ngikholwa ukuthi kunezizathu eziningana zalokhu. Okuyinhloko ikakhulu kungenxa yokushoda kwamalahle aseFrance. Emazweni athuthukile emhlabeni, yiFrance kanye neJapan kuphela abangenalo inani elikhulu lamalahle ukukhiqiza ugesi. IJapan ngandlela thile i-Atom phobic ngezizathu ezisobala.
61. Kungani singeke sikwazi ukuthumela udoti wenuzi emkhathini?
Imikhumbi-mkhathi ngezikhathi ezithile iyayiqhumisa ibe umkhathi.
62. Kungani iHemp ingekho emthethweni? Ikhula ngokushesha kunezihlahla, inamandla, futhi ayisiwo umuthi.
Bengingazi ukuthi i-hemp yezimboni yayingekho emthethweni. Kubonakala sengathi ngiyakhumbula ukuthi izingubo ze-hemp ziba semfashinini eminyakeni embalwa edlule, ngicabanga ukuthi yonke i-hemp yezimboni ayiyona into engekho emthethweni iyinsumansumane yasemadolobheni.
64. Kwenzeka kanjani ukuba izinto zibize kangaka esitolo esikahle? Kungakuhle kakhulu uma bengingakhokhi imali engaka.
Ukhokhela ithuba lokuba nesitolo eduze kwekhaya lakho.
65. Kungani sikhala ngentengo yegesi kodwa sikhokha u- $ 3.50 ngeGrande Mocha eStarbucks. (Mmmmmm.)
Ngisebenza ngebhayisikili emsebenzini futhi ngivame ukuphuza amanzi. Ngicabanga ukuthi abantu bakhathazwa iqiniso lokuthi intengo kaphethiloli ihamba nsuku zonke futhi abaqondi ukuthi kungani.
Ngo-Apr 2, i-2007 ku-3: 20 AM
ngifisa ukuthi ngibe nesikhathi esithe xaxa sokufunda lokhu.
Jan 28, 2008 ku-11: 40 AM
26. Ngoba akuyona yonke into engatholakala ku-Starbucks. (okwamanje)
50. Ngoba angamarobhothi angenakucasulwa.
48. Isixuku sebhulogi!